KALA DUWANAANTA CANABKA "MONARCH" - VITICULTURE
Waxaa jira noocyo badan oo canab oo leh rucubyo waaweyn iyo berry.
Xataa iyada oo awoodda dhexdhexaad ah dhexdhexaad ah, qaar ka mid ah xashiishad si gaar ah u shaqeeya ayaa awood u leh inay ku guuleystaan ​​guul aan horay loo arag.
Laakiin, marka laga eego noocyada kala duwan ee canabkeena Monarch, dadaal gaar ah looma baahna.
Ka dib oo dhan, xitaa inkastoo ay tahay qiyaasta celceliska of farabadan of canab, berry ah ee canab this si fudud u gaaro qiyaasta Record.
Haddii aad rabto inaad la yaabiso asxaabtaada - waxaad si kalsooni leh u abuuri doontaa kala duwanaantaada.
Iyo sida loo fuliyo abuurka saxda ah, iyo faa'iidooyinka kale ee Canab Canabku leeyahay - waxaan si faahfaahsan oo faahfaahsan kuugu sharxi doonaa hoosta.
"Boqortooyada" - canabku waa istaahilaa taliyayaal run ah
Qoob-ka-horumariyaha hiwaayadda ee Ruushka E.G. wuxuu u suurtageliyay in uu gaaro guusha noocan oo kale ah oo abuuraya noocyo cusub oo canab ah. Pavlovsky. Si aad u hesho kala duwan ee "Monarch" wuxuu isticmaalay kala duwan ee canab "Cardinal", pollinated leh isku dar ah manka ka noocyo kale.
Natiijada ka mid ah pollination sida, wuxuu ka gudbay canab "Talisman". Ka dib natiijooyinka isgoysyada noocaan oo kale ah waxay muujiyeen natiijooyin aan caadi aheyn, gardarrada cusub waxaa la siiyay magacyo dhab ah "Monarch".
Muuqaal calaamado ah oo canab ah "Monarch"
Kooxaha kala duwan ee noocyada canabka ah way yar yahiin, inkasta oo loo tixgeliyo inay yihiin kuwo waaweyn. Miisaankaagu wuu isbedbeddelaa laga bilaabo 0.5 ilaa 1 kilo. The berry waxaa la dhigayaa farabadan ee cufnaanta dhexdhexaadka ah. Foomka farabadan ee canab "Monarch" inta badan waa mid la qoondeeyey, inkasta oo inta badan laga helo cylindrical.
Laakiin faa'iidada ugu weyn ee kala duwan ee noocaani waa shaki ku jiro berry. Baaxadda ay gaareen dhab ahaantii waa weyn. Faakihaadka ukunta leh ee noocyada kala duwan waxaa laga helaa miisaanka laga bilaabo 15 ilaa 20 garaam., inkastoo ay jirto xitaa miisaankiisu yahay 32 garaam. Sidaa darteed, canabkani wuxuu leeyahay qaar la mid ah xataa xayawaan.
Heerka miisaanka celceliska "Monarch" waa 3.6 sentimitir, ballaadhkuna waa 2.6 centimitir. Midabka maqaarka ee canabkani waa caleemo-jaalle ah oo leh tan cadcad guduudan oo ka soo ifaysa dhinaca qorraxda. Dhismaha maqaarka berry ah ee berry waa mid cufan, laakiin inkastoo ay leedahay celcelis ah qaro, ma dareemo marka la cuno. Muuqaal qurxoon wuxuu siinayaa xataa soo bandhigid soo jiidasho leh.
Saxarka koobabka "Monarch" waa mid aan caadi aheyn, oo aad ufiican marka la isticmaalo hab cusub. Abuurka ku jira berry waa yar yahay, kaliya 2-3 shey. Saxarka ayaa ku jira qadar weyn oo casiir ah, taas oo sababta cufnaanta nooca berry waa dhexdhexaad. Dhadhanka noocaan oo kale ah waa mid aad u fiican oo macaan, dabeecad gaar ah "Monarch", wuxuu leeyahay dhadhan masar. Qaybta kiimikada ee canabka this waa mid aad u sonkor badankuwaas oo dhakhso u uruuriya, si ay u dhaqso badan.
Fasalka "Monarch" waa qadarin. Berry waa mid ku habboon isticmaalka aadanaha waxaana badanaa lagu iibiyaa gaar ahaan iibka. Sababtoo ah cufnaanta maqaarka, berry ayaa sidoo kale si fiican loo qaadi karo. Qadar badan oo casiir ah ayaa ka dhigaya noocyada kala duwan ee ku haboon samaynta khamri.
Shuruudaha cawska iyo bisil
Sida xilliga Bisaylkiisa ee canab "Monarch", ka dibna noocyada noocaan ah waa in loo aaneeyo celceliska hore. Xaqiiqdu waxay tahay in Bisaylka ee berry ku dhacaan waqtiyo kala duwan iyadoo ku xiran gobolka cimilada oo uu canab koray. Koonfurta, qaangaadhnimadu waxay bilaaban kartaa bilowga Agoosto 10 ama dhexaadkeeda, halka, tusaale ahaan, gobolka Samara ee Ruushka, waqtiyadan ayaa dib u dhacaya ilaa bartamihii Sebtembar. Celcelis ahaan, xilli sii kordhaya ee kala duwan ee sabiib ah this ku sii socdaan mar dambe, in ka badan 130 maalmood.
Waxyaabaha kala duwan ee noocaani waa mid aad u sarreeya, sababtoo ah hal duur ayaa inta badan keena 7 rodol oo berry ah. Waxaa habboon in la ogaado in awoodda kobaca ee baadiyaha Monarch ay aad u kacsan tahay. Geedka canabka ah wuxuu awoodaa in uu qaan gaaro 30% oo ka mid ah dhererkiisa, caleemaha sida caadiga ah waxay leeyihiin dherer ka badan hal mitir. Marka la gooyo waxaa lagu talinayaa in la baxo culeyska duurjoogga aan ka badnayn 35 indhood. Tirada ugu fiican ee caleemaha hal baadiyaha waa 24 gogo '.
Canab canab ayaa si madax bannaan loo xushay, tani waxay sabab u tahay ubaxa bisexual, Si kastaba ha ahaatee, waxay udubdhexaad u tahay in ay ugu wanaagsan tahay in laga dhigo dhinaca midig ee hooska.
Kala duwan oo canab ah "Monarch"
Inta badan qiimaha noocaan ah waa rucubyo qurux badan oo canab ah oo leh sarrifka sare iyo cabbirka fiican ee iibka. Sidoo kale, faa'iido wayn ayaa ah midhaha soo jiidasho leh, oo leh dhadhan gaar ah. Sidoo kale, faa'iidooyinka "Monarch" waa kuwan soo socda:
Ka dib markii uu bislaaday, berry ayaa ku sii jiri karaa baadiyaha iyada oo aan waxyeello dhadhanka.
Isteroberkuna ma falcelin isbeddel deg deg ah ee qoyaanka iyo hawada ciidda. Root canabku sidoo kale lama calaamadin.
Xirmooyinka Horn waxaa lagu arkay xitaa xaaladaha cimilada xun.
Geedka canab ee "Monarch" waxay leeyihiin heerar aad u sarreeya oo ah rooting sida marka la beerto on xididdadiisa u gaar ah, iyo marka goosashada.
Qoryaha geedka canabka ah wuxuu leeyahay iska caabin wanaagsan oo leh heerkulka jiilaalka hooseeya. Dhibaatooyinka -23-25ºS lama calaamadeeynin.
Cadaadiska sare ee noocyada kala duwan ee kilyaha iyo jabinta ee caaryada cawl miro.
Dhibaatooyinka kala duwan ee "Monarch" iyo siyaabo lagu xalliyo dhibaatooyinka
Waxyaabaha ay ka mid yihiin cilladaha waa noocyada kala duwan ee noocaas ah daadinta ugxansidaha. Sidaa darteed, si aanay u lumin beergooyska gebi ahaanteed, waxa fiican in aan la qaadin khafiifinta canab. Sidoo kale, waxaa la aaminsan yahay in qaadista caleemaha ka hor ubax waa mid ka mid ah sababaha daadinta ugxan. Iskudhin tirada tirada rucubyada on a grapevine taagan marka beeraha pea bilaabaan inay sameeyaan on iyaga.
Bush iyo midhaha canab "Monarch" inta badan saameyn ku yeeshay dhoobotaas oo keeni karta cawaaqib xun. Si looga fogaado sida, geedka canabka ah waa in la buufiyaa si looga hortago.
Sida loo abuuro canabka "Monarch" goobta: su'aalaha iyo jawaabaha
Canab wacan wuxuu u baahan yahay hab fiican oo sax ah. Su'aasha ugu horreysa waxay ku saabsan tahay xulashada saxda ah ee walxaha kala duwan ee beeritaanka. Waxaad isku diyaari kartaa jiridaada ama waxaad iibsan kartaa seedling horay u qaaday rootiga. Waa mid aad u muhiim ah in xididdada geedo iibsaday yihiin si wanaagsan loo horumariyo. Caddaynta wanaagsan, aan xididdada la qalajiyey waa midab cad. Geli cutubka ee seedling waa inay ahaadaan cagaar. Tirada ugu wanaagsan ee godadka for gooyn - 2-3.
Sidee loo diyaariyaa jarida beeritaanka?
Diyaarinta guntooda loogu beeri karo xididdada ay udub-dhexaadka u ah iyo u samaynta mira-geed sabuuradu waa wax ka duwan. Xaaladda kowaad, goynta ayaa si fudud loo yareeyaa biyaha ama lagu beeray galaas oo leh dhul qoyan oo ka tagay illaa illaa xididka iyo furitaanka indhaha.
Dhinaca labaad, jirku wuxuu u baahan yahay in la jarjaro. Waa in si taxadar leh loo sameeyaa oo habkaas oo ah laba dhinac oo keliya ayaa la gooyey, laba garab ayaa ku hadhay dhinacyada. Dheeraad ah, jirida waxaa la dhigayaa hal maalin oo biyo ah. Ka hor intaan la kulmin, qaybta la jarjaray waxaa lagu dhejin karaa xero gaar ah oo loo yaqaan 'Humate Solution' (xal, 10 dhibcood oo ah daroogada halkii litir oo biyo ah). Xalka isla waa in la dhigo iyo abuurka.
Qeybta sare ee jarista ayaa lagu talinayaa in wax. Tani waxaa loo sameeyaa si loo hagaajiyo ilaalinta qoyaanka ee gacanta, taas oo markaa, waxay kordhinaysaa awoodda ay u leeyihiin in la dhiso. Laakiin waxaa lagama maarmaan ah in si taxaddar leh wax looga qabto jirida: Si aan wax dhaawac ah u gaarin, jirida keliya ayaa si fudud u galeysa galka shafka oo isla markiiba lagu qaboojiyo biyaha.
Waa maxay meesha ugu fiican ee lagu beeray canab "Monarch"?
Canabadu aad ayay u jecel yihiin iftiinka qorraxda, iyada oo aan macquul aheyn qaangaadhka macaamiisha ee berry ma iman wakhtiga saxda ah. Sidoo kale, waxay ka hor imaanaysaa dabaylaha qabow, kuwaas oo inta badan kuwa ku dhufta waqooyiga. Sababtan awgeed, waxaa ugu wanaagsan in lagu beero derbiyada koonfureed ee dhismayaasha, taas oo isla markaasba noqon doonta ilaalinta dabaysha iyo taageerida dareenka toosan.
Sidoo kale, nooca carrada ee canabka lagu beeray waa mid aad muhiim u ah. Warshadani waxay ku habboon tahay sanbabada. carrada leh heerarka qoyaanka ee habboon.
Dhibaato adag ayaa ka jirta carrada dhoobada iyo dhulluxyada qoyan. Ma noqon doonto suurtagal in la gaaro noolaanshaha canabka ah ee caleemaha.
Xulashada ugu wanaagsan ee canab waa carrada madow ee leh dhulka dhulka 1.5 mitir. Haddii ay kor u kacaan - hubi inaad sameysid nidaam dheecaan ah goobta, qotominta qulqulka ama wax la mid ah balli. Haddii kale, canab beerto waa in laga tagaa.
Waa maxay qaabka ugu wanaagsan ee loo beerayo canab "Monarch", iyo wakhti ay tahay inaad doorato?
Waxaan mar hore ku soo sheegnay in soo degitaanka Monarch loo qaadi karo sida iyadoo la adeegsanayo geedo kala duwan, iyo isugeynta stock on shtamb ee old grape. Si kastaba ha ahaatee, waxaa haboon in la tixgeliyo xaqiiqda ah in natiijooyinka ugu wanaagsan ee dhadhanka ay awoodaan in ay bixiyaan canab, kaas oo lagu beeray on xididdadiisa u gaar ah. Si kastaba ha ahaatee Beeritaanka sheyga ayaa hubin doona in si dhakhso ah loo geliyo geedka canabka ah inta lagu jiro xilliga firaaqada iyo waxsoosaarka sare ee sanadaha hore.
Haddii aad dooratay inaad soo saaro sapling, waxaa ka wanaagsan inaad ku fuliso guga hore, tan iyo sapling ku qaboojiyo jiilaalka si aad u xun, sida ma ahan gabbaad. Wixii canab ah "Monarch" waxay ku fiican tahay guga iyo dayrta labadaba. Kadib, tallaalka waxaa loo samayn karaa siyaabo badan:
Graft "madow" oo ku yaal shtamb oo isku mid ah.
Graft cirifka cagaaran si ay cagaarka cagaaran u noqoto baadiyaha hore.
Qaadashada "mugdi" madow si aad u buuxsanto.
Sidee loo beeraa canab iyada oo sapling ah?
Sida loo diyaariyo beerashada faseex ah ee aan horeyba ku sharaxnay kor, hadda waa in la diyaariyo ceelka. Mugdigeeda waxaa badanaa la sameeyaa laba ilaa saddex jeer xajmiga nidaamka xididka ee seedling. Tani waxaa la sameeyaa si loo dhigo iyada oo sidoo kale isku dhaf ah humus leh dhulka. Bacriminta waa lagama maarmaan tahay lakabka kale ee dhulka, oo aan lagu qasi karin bacriminta ama Bacriminta macdanta ah (haddii kale waxaa jira feejignaan sare oo lagu gubayo xididdada seedling canab).
Marka xigta, qaado seedling our iyo waxoogaa la jarjiray mindi fiiqan ama shears talooyin ee xididdadiisa. Waxaa lagama maarmaan ah in si taxadar leh loo yareeyo seedlingka godadka si ay u noqoto qoorta xididku kuma foorariin godka. Taas ka dib, waxaan si tartiib ah u aasaynaa godadka, waxaanad hubineysaa in xididada aan waxyeello lahayn oo aysan jirin meel banaan oo u dhaxeysa.
Aad bay muhiim u tahay in la qodo taageero xooggan oo ku dhow seedling canab. Ka dib markii la beero, canabku si xoog leh ayey u waraabin jireen, taas oo ugu yaraan 30 litir oo biyo ah loo isticmaalo (inkastoo ay mudan tahay in la fiiriyo xaaladaha cimilada).
Maxay tahay wax gaar ah oo ku saabsan xoqitaanka xayiraadda canabka ee Monarch?
Gooynta kala duwan ee noocaan ah waxay leeyihiin awood wanaagsan oo xidid. Sidaa darteed, haddii la gooyo si wanaagsan ayaa loo doortay, waa in aanad ka walwalin haddii loo isticmaali doono saamiyada. Laakiin si kastaba ha ahaatee, waxaa lagama maarmaan ah in si sax ah loo dhiso, isagoo u diyaar garoobaya oo keliya maadada lafteeda, laakiin sidoo kale asaaska. Gaar ahaan shtamb waa in si taxaddar leh loo nadiifiyaa, taasoo ka dhigeysa mid gebi ahaanba siman oo tirtira dhammaan wasakhda maro qoyan.
Dheeraad ah, saamiyadu waa kala qaybsan yihiin si dhexdhexaad ah si goosashadu u fiican tahay. Waxaa lagama maarmaan ah in la yareeyo jarista gudaha gudaha qaybta si ay qaybta ugu dillaacday qarsoodi tahay. Ka dib markii shtamb this si adag loo adkeeyay iyo dhar la dhoobo.
Daryeelidda canab "Monarch" - Waa maxay waxyaalaha aan la dabooli Karin?
Daryeelka canabkiisa waxaad u baahan tahay si gaar ah taxaddar, sababta oo ah warshadani waxay awood u leedahay in ay si aad ah u yareeyso dhalidda ay ku maqnaato maqnaansho habboon iyo waraabinta. Door muhiim ah ayaa sidoo kale lagu ciyaaro dhar habboon iyo daryeel carrada agagaarka jirridda.
Waraabinta - yoolalka iyo joogtaynta
Waraabinta canabku waxay u baahan tahay si aad u xoogan oo keliya marka ay jirto xaalad ah abaaro xoog leh iyo carrada oo xajisto qoyaanka. Xannaannada wanaagsan, badanaa lagama maarmaanka u ah inay badiyaa biyaha, waxay noqon doontaa mid ku filan in la helo laba waraabiyo ka hor bilowga bilowga iyo dhammaadka muddadaas. Mustaqbalka, waa inaad si joogto ah ula socotaa heerka qoyaanka ciidda iyo waraabinta haddii loo baahdo.
Neefsashada iyo dhar beerto canab - xeerarka ugu muhiimsan
Mulching, sida bacrimin leh Bacriminta macdanta, ayaa kaalin muhiim ah u leh kobaca sabirta canabka ah.
Gaar ahaan Mulching, marka lagu daro in lagu caawiyo ilaalinta qadarka ugu wanaagsan ee qoyaanka ee ciidda, sidoo kale quudiyo xididada canab. Indeed, sida mulch for canab, inta badan loo isticmaalo waa humus madaxbannaan, kaas oo lagu daboolay dusha ciidda leh lakabka 3 sentimitir.
Potassium iyo fosfooraska ayaa aad ugu habboon sida Bacriminta macdanta ee canab. Waa macdanahaas oo saameyn aad u wanaagsan ku leh koritaanka canab. Waxaa lagama maarmaan ah in ay si toos ah ugu soo qaadaan ciidda inta lagu jiro dabacsanaanta. Si kastaba ha ahaatee, ma aha in ay u qalantaa iyaga si toos ah shtab laftiisa, sababtoo ah sidan waa la dhaawici karaa, oo weli ma awoodo in ay soo nuugaan Bacriminta.
Waxa kale oo xiiso leh in la akhriyo oo ku saabsan processing dayrta ee canab.
Waxaan u haynaa daaq qabow ah xilliga jiilaalka
Si aad u daboosho canab si fiican, baadiyaha waa in si fiican loo gooyaa, yaraynta waqtiyada iyo dhulka ku rid. Markaa kadib daboolay hay ah iyo duub. Si kastaba ha noqotee, dhammaan tallaabooyinkan waxaa la qabtaa oo kaliya haddii heerkulka hoos u dhacu ka hooseeyo 25ºS ay suurtagal ka tahay gobolkaaga. Haddii aad leedahay kuleyliyaha kuleyliyaha ah, waxaad xaddidi kartaa naftaada si aad u daboosho carrada.
Canaan dhoobo "Monarch" - maxaa muhiim u ah in la ogaado?
Kala duwanaanta noocaan ah waxaa badanaa laga sameeyaa afar gacmood. Dabadeed ayaa lagula talinayaa isaga - sidaas darteed kaliya 4-6 indhaha ayaa loo baahan yahay in laga saarohalka uu ka baxayo baadiyaha ku saabsan 40-ka. Isla mar ahaantaana, waa in aanad ka xumahay canab marka la gooyo, maxaa yeelay tiro badan oo caleemo waxay kaliya u horseedi doontaa hoos u dhaca tayada miraha. Canab waxaa lagu xiraa si gaar ah inta lagu jiro xilliyada nasashada. Canabka khafiifka ah ma aha wax ka hor wakhtigii abuurista dhirta iyaga.
Badbaadinta noocyo daaqa ah canabka "Monarch" oo ka timaadda cudurka
In kasta oo xaqiiqda ah in canab "Monarch" loo arko mid ka mid ah kuwa ugu sii waaraya, waxay mararka qaarkood ku dhufan kartaa dhar cad. Si looga badbaado waxyeellada baadiyaha iyo caleenka cudurkan, hubi inaad qaaddo daaweyn ka hortag ah. Sida daroogada loogu talagalay buufinta ayaa inta badan la isticmaalaa. 1% dareere Bordeaux. Moobeytana waxaa lagu sameeyaa si isku mid ah sida waraabinta qasabka ah.